Eyona Forex EA yeNzuzo ngoMeyi ka-2022-Iinzuzo kunye neeNgcaciso eziFihliweyo
Eyona Forex EAs 2022
I-EAs ye-Forex ibonakala ngathi ikuyo yonke imidiya yoluntu okwangoku - ngamabango abantu abadumileyo abahlukahlukeneyo abavumayo. Ukuba awukhange ucinge ngokusebenzisa eyona Forex EA ngokwakho, banikezela ngesicatshulwa kwingeniso yokwenziwa.
Ngokusisiseko, i-forex ye-EA isebenza njengemarike ye-Forex yoMncedisi woMntu. Ngokusebenzisa imigaqo ebekwe kwangaphambili, iiparameter kunye nohlalutyo lobuchwephesha- i-EA inokuthenga / ithengise i-forex egameni lakho. Abanye abathengisi bakhetha amava okuzenzekelayo, oko kuthetha ukuhlengahlengisa ezinye zeefilitha ze-EAs kunye noseto lwento kwaye bayishiya iqhuba.
Abanye abatyali mali bafuna amava okuphela kunye nokukhetha i-EA EA ezenzekelayo. Oku kuhle kubarhwebi abanamava abangenalo ixesha elininzi lokurhweba ngendlela abafuna ngayo. Ngapha koko, olu seto lulungele ii-newbies ezingaziyo ukuba zingaqala ngaphi kwihlabathi elinokungazinzi kurhwebo lwe-forex.
Kwesi sikhokelo, sihlanganise isikhokelo esibanzi kwi forex EAs. Oku kubandakanya yonke imiba enje ngendlela abasebenza ngayo, izibonelelo, into omawuyijonge ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho, kwaye okokugqibela - isishwankathelo se-5 engcono ye-forex EAs ka-2022.
Zithini ii-EAs ze-Forex?
Inxalenye enkulu yorhwebo kwi kwimarike Forex (kunye nalo naliphi na elinye icandelo lotyalo-mali) liphando kwaye ligcina iso lakho kwibhola. Oku kuthetha ukunikezela ixesha elininzi ekuqwalaseleni utshintsho kwimarike yemali kunye nokugcina unolwazi ngeendaba zoqoqosho nezemali.
Abatyalomali abaninzi be forex bathengisa ngokusisigxina, kwaye ngamnye unesicwangciso sakhe somsebenzi. Umzekelo, umrhwebi unokuzinikela iiyure ezisi-7 ngosuku esenza intshukumo kwimarike ye-forex ngophando.
Kwelinye icala lesikali, kukho abathengisi abangenalo ixesha lokufunda kakuhle kwimarike ye-forex. Siphila kwihlabathi elixakekileyo, kwaye kulapho ubuchwepheshe be-EA obuzenzekelayo bungena khona.
Unyaka ngonyaka abathengisi be-forex basebenzisa ezi nkqubo zininzi. Ziyilelwe ukwenza urhwebo lwe-forex yokuphela kokuya ngaphandle kokuba uphakamise umnwe.
Into ekufuneka uyenzile kukufaka imali kwiakhawunti yakho yomrhwebi, layisha irobhothi, kwaye ungaqhubeka nobomi bakho. Kananjalo, i-EA ye-forex iya kukulawula yonke into.
Zisebenza njani ii-Forex EAs?
Ngokusisiseko, i-EA ye-forex yinkqubo yorhwebo esebenzisa uhlalutyo lobuchwephesha kunye nealgorithms ezimiselwe kwangaphambili. I-EA ikhangela imarike ye-forex ekhangela urhwebo olunokubuyisa.
Njengoko sichukumisile, oku kunokuba yinto enokusetyenziswa ngokuzenzekelayo, okanye isebenze ngokuzenzekelayo kwaye isekwe kwisicwangciso esele sicwangcisiwe. Izibonelelo ezicacileyo zokusebenzisa i-EA EA ukurhweba kukukwazi ukungena ukuthenga nokuthengisa izikhundla 24/7. Ungayichazanga eyokungabikho kweemvakalelo zorhwebo. Okungakumbi kokulandelayo.
Zithini izibonelelo ze-Forex EAs?
Ngeli nqanaba, uyazi ukuba ii-EAs zangaphambili zikuvumela ukuba uthengise i-forex ngaphandle kokuba wenze into. Ukuba awusele uthengisiwe kwizibonelelo ezinokubakho zokusebenzisa i-EA ye-forex, emva koko funda.
Izibonelelo zaBarhwebi abangenamava
Njengoko besesitshilo, enye yezona zibonelelo zikhulu zokusebenzisa i-EA ukurhweba kukuba abatyali mali banakho ukufikelela kwimarike ye-forex enkulu. Ngenxa yoko, oku kuthintela isidingo sokufunda ngokuthengisa kunye nokufunda iitshathi zamaxabiso kunye nedatha yobuchwephesha.
Kungenxa yesi sizathu, ukuba le nkqubo ingadla ixesha elininzi. Emva kwayo yonke loo nto, ukuchitha iinyanga ukuphela kokufunda indlela yokurhweba kwasekuqaleni ngumsebenzi onzima kakhulu. Eyona forex EAs iyakwenza ukuba weqe isidingo sokuqonda amaxabiso entengo, iitshathi kunye nezalathi.
Ke ngoko, i-forex ye-EA ivumela abathengisi ukuba bathathe inxaxheba kutyalo-mali lwe-forex, kwaye ngenxa yokuba izenzekelayo, ungahlala nje uphumle.
24/7 Amandla oRhwebo
I-EAs ye-Forex ikhanya ngokuqaqambileyo apha. Inkqubo yekhompyuter entsonkothileyo ayifuni iiyure ezisibhozo zokulala ukuze zisebenze njengabantu.
Masithi uthengisa i-forex ngokusisigxina kwaye isicwangciso sakho siquka ukuzinikela iiyure ezi-6 ngosuku uphanda iimarike, kunye neeyure ezi-3 zisebenza kwizinto ozifumeneyo.
Ngelixa iiyure ezili-9 ozichitha ubeka isicwangciso sakho ekusebenzeni kunokuba luncedo-cinga ukuba ingakanani inzuzo onokuyifumana xa unokuphanda iiyure ezingama-24 zonke usuku?
Sifuna ukuphumla nokulala ukuze sisebenze ngokufanelekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla, ngelixa i-EA ye-Forex inokuzanelisa iimfuno zakho zorhwebo 24/7.
Oku kufanelekile kubantu abasebenza ngokusisigxina kodwa abafuni kuphulukana namathuba okuthengisa. Inokwenza isenzo ukongeza kwisicwangciso esisigxina sokurhweba.
Akukho Iimvakalelo zoRhwebo
Uninzi lwabarhwebi abanamava bazi kakhulu ngeemvakalelo ezintathu zorhwebo: ithemba, ukubawa kunye noloyiko.
Isigqibo esingalunganga esisekwe kwezi mvakalelo sinokuba nefuthe eliyintlekele kwipotifoliyo yomtyali mali. Ukuvumela iimvakalelo zorhwebo zibaleke kunye nawe kunokukhokelela kwizigqibo zokurhweba ngokungekho ngqiqweni.
I-forex ye-EA ayinangxaki. Enye yeenzuzo ezininzi zokusebenzisa imveliso enje kukuba zinengqiqo kwaye zichanekile ngoyilo-lokwenza izigqibo zorhwebo kunye nokuqhuba amanani ngaphandle koloyiko, ithemba okanye ukubawa konke konke. Isoftware icwangciselwe ukulandela iimeko zethiyori.
Sele sitshilo, kodwa ii-EAs zangaphambili azidingi kulala. Oku kuthetha ukuba i-EA iyakwazi ukwenza inani elingenasiphelo lophando, ngaphandle kokuba wenze into.
Inani elikhulu labathengisi abanamava abagxile ekujongeni inani elincinci leeklasi zeasethi. Kungenxa yokuba kusebenza ngakumbi ekufundeni ukungena kunye nokuphuma kwezinto ezimbalwa kunokuba uzenzele ngolwazi oluninzi kunokuba unokwenza.
Incinci njengelizwi elithi 'jack yazo zonke izinto zorhwebo- inkosi yazo akukho'. Kuya kuba nzima ukuphanda ngempumelelo inani elikhulu leeasethi kwaye uphumelele. Ngaphandle, ukudibanisa ukwahluka kweeasethi ngesandla yinkqubo enzima kakhulu ukuyenza.
Ngapha koko, ii-EAs ze-forex azikhawulelwanga ngendlela efanayo abathengisi babantu. Isoftware ephucukileyo inokukhangela amawaka eemarike ezahlukeneyo ngaxeshanye kungabikho nzima kusebenziso lwayo.
Yimalini indleko ze-Forex EA?
Akukho mpendulo icace gca kumaxabiso, kuba akukho zimbini ii-EAs ezifanayo. Abanye ababoneleli be-EA EA basebenza kulwakhiwo olusekwe kwikhomishini. Ngenxa yoko, iqonga liza kuthatha ikhomishini esele igqityiwe (ngohlobo lwepesenti) kurhwebo ngalunye oluyimpumelelo olwenziwe egameni lakho.
Masikunike umzekelo; Cinga ukuba umboneleli we-EA oyikhethileyo ufuna iipesenti ezili-10 zekhomishini:
Siya kuthi ubeke $1,500 kwi forex EA iqonga.
Urhwebo lwe-80 lwenziwa ngexesha lenyanga.
I-ROI yi-12% - eyi-$ 180.
Emva koko, umboneleli uthatha ikhomishini ye-10% elingana ne-$ 18.
Uya kusala nge-162 yeedola kwiinzuzo.
Enye yezinto ezilungileyo ngolu hlobo lwesakhiwo sekhomishini kukuba iqonga le-EA liya kwenza inzuzo kuphela xa urhwebo lwakho luphumelele.
Njengoko ubona, kuyona nto ibalulekileyo kubaphuhlisi be-EA ukubeka amashishini alumkileyo ukwandisa i-ROI yakho.
Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka uhlawule umrhumo wokufumana enye i-EA EA ngohlobo lwesoftware. Iqonga le-imeyile unxibelelwano olusebenzayo kuwe. Kuya kufuneka ufake inkqubo ye-EA ngokusebenzisa iqonga lokurhweba lomntu wesithathu njengeMetaTrader4 okanye iMetaTrader 5. Kwimeko yemveliso yemali ethe tyaba, akuyi kubakho khomishini njengoko ungumnini wemveliso engaphantsi.
Ekuphela kwento enokubakho apha kukuba awuyi kuzuza kulondolozo. Nangona kunjalo, konke akulahlekanga, njengoko ii-EAs ezingcono ze-EAs ziza nohlaziyo lwasimahla kunye nenkxaso kubathengi abangama-24/7.
Ngaba ii-EAs ze-Forex zikhuselekile ukuba zingasetyenziswa?
Kukho amakhulu xa kunganikezelwanga amawaka ababoneleli bonke abarhwebi, bebonelela ngeziphumo abanakho ukuzisa ezinje ngembuyekezo enkulu kunye namaxabiso okuphumelela ama-90%.
Amathuba kukuba ezi ndawo ziyimbumbulu. Nawuphi na umboneleli onikezela ngeziphumo ezikude kakhulu ngokuqinisekileyo uzama inhlanhla kubahwebi abangenacala. Ngelishwa, abanye abathengisi abafumani mabango engenasisekelo kude kube lixesha elide kwaye baye babanga imali yabo.
Ezinye iingcebiso ezifanelekileyo ziya kuba ukuba awuqinisekanga malunga nomboneleli, yenza uphando. Ukujoyina iqonga elinikezela ngesilingo sasimahla okanye isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ngumbono olungileyo malunga noku. Okungenani ngale ndlela, ungashiya ukuba ayisiyiyo yonke into ekuqhekeke kuyo. Ngokwenza njalo, uza kungena uvule amehlo, kwaye ungazishiyi, kunye nemali yakho, usengozini.
Ungayikhetha njani i-Forex efanelekileyo ye-EA?
Qhubeka nengqondo, ubuncinci kuba usazi ukuba i-forex EA scammers ilapha inokusindisa abathengisi ukuba babethwe ngamawaka eedola. Kuya kuhlala kukho iiwebhusayithi ezinganyanisekanga ezilinde ukuthatha ithuba. Kubalulekile ukuba ulumke.
Ngale ngqondo, singacebisa ukwenza oku kulandelayo ngaphambi kokuthenga i-EA ye-Forex.
Ngaba amaBango e-Forex EA ayinyani?
Kulula ukwenza izithembiso zokubuyisa iipesenti ezingama-90 ngenyanga. Emva kwayo yonke loo nto, nabani na ovumayo unokusetha iwebhusayithi enikezela inyanga kwitonga. Umgaqo olungileyo wesithupha 'ukuba kubonakala kukuhle kakhulu ukuba kungayinyani- mhlawumbi kunjalo'.
Ukuba iqonga le-forex le-EA ojonge kulo lithembisa inzuzo enkulu yenyanga enomngcipheko ophantsi- oko kuya kuphakamisa iintsimbi zealam. Njengoko sigutyungelwe, licebo elilungileyo ukukhetha ii-EAs zangaphambili ezibonelela ngokungqinisisa iziphumo zazo.
Iakhawunti yeedemo ze-EA zorhwebo lukhetho olunengqondo kubathengisi abanamava nabatsha ngokufanayo. Ngale ndlela, unokuvavanya imiqondiso ezenzekelayo kunye nohlengahlengiso lokucoca ulwelo. Xa kuziwa kukungqinelana kwayo, unokujonga iziphumo zokurhweba ezikhoyo zenkampani kunye nokubuyela umva.
Ezi zibalo zibonisa indlela i-EA EA esebenza ngayo ngexesha elithile. Iqonga lokwenyani liya kubonelela ngokufikelela kulo lonke olu lwazi luluncedo, ukungqina ukuba zisemthethweni kwaye ayisiyontle nje ekuthengiseni.
Yeyiphi idiphozithi encinci?
Abanye ababoneleli be-EA EA bachaza ubuncinci bemali yedipozithi ngaphambi kokuba bangene kwinkqubo ye-EA. Unoko engqondweni, kuya kufuneka usoloko ujonga imigaqo kunye neemeko zesiza ukujonga eyona dipozithi ifunekayo.
Kungangcungcuthekisa ukutyala imali yakho eyi-1,500 yeedola kwimali oyisebenzele nzima, emva koko ufumane kamva ukuba liqonga le-EA eliqhatha. Rhoqo kunokuba idipozithi encinci iya kujikeleza uphawu lwama- $ 200, nangona kwezinye iisayithi esi sisiphakamiso nje. Ukuba umboneleli unikezela abathengi ngesiqinisekiso sokubuyisa imali, olo luphawu oluqinisekileyo.
Kwiphepha leflip, ukuba usebenzisa isoftware ye-EA EA ehambelana nayo MT4/ 5, ke idipozithi encinci iya kuxhomekeka kukhetho lwakho lomrhwebi.
Ufuna malini ukuZenzekelayo?
Njengoko usazi ngoku, kuninzi okwahlukileyo ngokweendlela ezisebenza ngayo i-EA. Kananjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo indlela onqwenela ukusebenza ngayo xa urhwebo.
Ngaba ungathanda ukuba nomlinganiselo othile wolawulo? Abanye abathengisi bakhetha ukusebenzisa i-EA ye-forex ukwenza uphando lwentengiso ye-forex, kodwa emva koko bangene ngesandla bathenge kwaye bathengise izikhundla ngokwabo.
Mhlawumbi ungakhetha ukubeka imali kwaye uvumele i-EA yenze wonke umsebenzi? Oku kuthetha ukuba ungayenza eyona nkonzo yokuphela kokuphela, ungenzi nto kwaphela.
Xa kuziwa ekuthengeni nasekuthengiseni, abanye abathengisi bathanda ukuba nezwi lokuba bayazenza na okanye bangazenzi izinto ezifunyaniswe yi-EA. Ke, endaweni yokuvumela i-EA ithathe isigqibo, ungalinda umqondiso kwaye emva koko ufake owakho ukuthenga / ukuthengisa kunye nokumisa ilahleko / iimeko zokuthatha inzuzo.
Ekugqibeleni, lukhetho lwakho- kwaye luya kuxhomekeka kwisitayile sakho sokurhweba kunye namava kurhwebo lwangaphambili. Kufanelekile ukujonga iwebhusayithi yomnikezeli we-EA ukubona ukuba yeyiphi indlela yokuthengisa kunye nesicwangciso esisebenzisa isoftware.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo?
Kwimiba yeenketho zokuhlawula, zonke iiplatifti ze-EA ze-forex ziyahluka. Umzekelo, abanye banokwamkela kuphela i-cryptocurrencies okanye PayPal. Emva koko kuya kubakho ababoneleli abaya kwamkela uluhlu lweendlela zokuhlawula eziqhelekileyo (ezifana ne-debit / credit cards).
Ukuba kukho indlela ethile yokuhlawula ekufuneka uyisebenzisile, kubalulekile ukukhangela okukhoyo ngaphambi kokuba wenze iiyure zophando kwaye wakhe amathemba akho.
Ngaba likho ixesha lokuHlangula?
Ukungabinakho ukufikelela kwiingxowa-mali zakho kunokuba yinto eyinyani kwizikrweqe. Ingumbono olungileyo ukujonga imigaqo kunye neemeko zomboneleli we-EA EA ukuze uqiniseke ukuba akukho xesha lokuhlengwa okanye umda wokurhoxa.
Ewe kunjalo, oku kuqwalaselwa kufanelekile kuphela ukuba ukhetha i-100% ye-automated process-ethetha ukuba umboneleli uya kuhambisa irobhothi kwindawo yabo ekhethiweyo yomrhwebi.
Zeziphi iiperi zemali endinokuzenza ukuRhweba?
Ezinye ii-EAs zangaphambili zithengisa zonke iiperi zemali phantsi kwelanga. Ngelixa abanye begxile kwiseti embalwa, okanye kwinto enye.
Olu lwazi olubaluleke ngakumbi ngokubhekisele apho kutyalwe imali yakho enexabiso.
Kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele xa uzingela i-EA yakho efanelekileyo. Ukukhumbula ukuba uya kubeka emngciphekweni imali oyisebenzele nzima, singacebisa ukuba sifunde ngala manqaku alandelayo.
Ngaba kukho umda woBungakanani beMida?
Olunye usetyenziso olukhulu lweeakhawunti zedemo ye-EA kuvavanya ukusebenza kwe-EA xa utshintsha ubungakanani beodolo yakho. Amanye amaqonga anokusebenza kakuhle kwii-odolo ezincinci kwaye awaluphathi utshintsho.
Eyona forex ye-EAs iya kwenza okufanayo ngaphandle kwezi zinto.
Ngaba Iziphumo zoRhwebo eziBukhoma ziyafumaneka?
Silumkisile ngobungozi bobuqhetseba be-EAs. Amaqonga alungileyo abonelela Ixesha elilungile Iziphumo zokurhweba, kuba iziphumo ezilinganisiweyo zinokulawulwa. Urhwebo olulinganisiweyo alunakho ukubonisa ukuthengiswa kwemali, nto leyo ebaluleke kakhulu kurhwebo lwe-forex.
Ngaba uMboneleli we-EA ubuyisiwe?
Ukubuyela umva akuyiyo eyona nkcukacha ibalulekileyo malunga ne-EA ye-Forex. Kodwa, iya kukunika umbono olungileyo wokuba isoftware ye-EA isebenza njani kwiimeko ezahlukeneyo zentengiso. Oku kubandakanya iimetrikhi ezinje ngokuguquguquka okuphezulu kunye notshintsho lwezoqoqosho.
Eyona forex ye-EAs ibuyisiwe kusetyenziswa iimeko ezahlukeneyo zentengiso kunye nezibini zemali. Olu phononongo luhlala lubonisa ukuphumelela okunokubakho kunye nelahleko, min kunye nokuhla okukhulu, kunye nomngcipheko wokuvuza umyinge. Abanye abathengisi be-forex baya kukulungela ukwenza olu vavanyo.
Yintoni ipesenti ye-Forex EA yokutsala?
Ukutsala ngumahluko phakathi kwenqaku lamaxabiso asezantsi elikufutshane kunye nendawo ephezulu. Umahluko phakathi kwebhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo ibonisa inzuzo elahlekileyo kwimisebenzi elahlekileyo.
Abanye abathengisi bathanda ukwehla okulumkileyo okuphezulu kwe-5%, ngelixa abanye bonwabile ukuya phezulu njenge-15%. Kuphelele kukhetho lomntu. Olu lwazi luya kufumaneka kurhwebo ngorhwebo, kwaye ngokulandelelana.
Uqala njani nge-Forex EA
Njengesandi sendlela i-EAs esebenza ngayo kwaye ufuna ukuhambisa irobhothi eyeyakho? Ukuba kunjalo, ngoku siza kuchaza indlela yokungena kumnikezeli we-EA EA ukuze uqalise kumkhondo olungileyo.
Inyathelo 1: Khetha uMboneleli we-Forex EA
Ukuqala, kufuneka ukhethe i-EA EA ofuna ukuyisebenzisa ukuthengisa. Ukuba unengxaki yokufumana enye, sibandakanyile ii-EAs zethu ze-2022 ezilungileyo ze-XNUMX ezantsi kweli phepha.
Inyathelo 2: Thatha isigqibo malunga nokukhetha kwakho ukuRhweba
Ezinye ii-EAs ze-forex zibonelela ngokukhetha amathuba okurhweba anjengeeasethi ezahlukeneyo, thatha inzuzo kunye nokuyeka ukulahleka kokukhetha.
Ukuba ungenamava kwimarike ye-forex, ke i-EA ezenzekelayo iyakuba yeyona ndlela ilungileyo kuwe. Ngokuvumela i-EA yenze wonke umsebenzi ungaqala ukurhweba kwangoko.
Kwakhona, ukuthatha ithuba lesilingo sasimahla okanye iakhawunti yedemo yindlela elungileyo yokufumana iinyawo zakho ngeqonga.
Inyathelo 3: Yenza idiphozithi kwaye uqalise ukurhweba
Xa unayo ekhethiweyo iakhawunti ye-forex ye-EA kwaye ufumene okanye ukhuphele isoftware- unokufaka imali. Njengoko besitshilo, soloko ujonga ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula ezamkelweyo.
Qiniseka ukuba ujonga ukuba ngaba kukho idipozithi encinci ukuze wazi ukuba ujonge ntoni.
Ukuba ukhetha iakhawunti yesandla kuya kufuneka uthengise ngokwakho. Ukuba uthathe isigqibo sokunamathela kwi-100% ngokuzenzekelayo ungahlala phantsi kwaye uphumle. Uninzi lwababoneleli be-EA EA bayakuvumela abathengisi ukuba batshintshe ezi zicwangciso kamva.
Thenga i-Forex EA yeMetaTrader 4 / MetaTrader 5
Kwimeko yokuthenga i-EA kwiqonga le-Intanethi kwaye uyikhuphele- inkqubo ilula. Konke okufuneka ukwenze kukulayisha ifayile kwiMetaTrader 4 okanye kwiMetaTrader 5 kunye ne-Forex EA eza kuqala ukurhweba phantse kwangoko. Iwebhusayithi efanelekileyo iya kuhlala ichaza ukuba leliphi iqonga elifunekayo.
Usenokuseta ubuncinci bobungakanani bakho kunye nobukhulu beodolo ephezulu kunye nolunye uhlengahlengiso olwahlukileyo ukuze ulungele isicwangciso sakho. Xa usebenzisa olu khetho sicebisa ukuba usebenze kwiakhawunti yedemo ukuze uqiniseke ukuba isebenza ngendlela efanelekile.
Ungayibonisa njani i-Forex Broker eyamkelweyo
Xa uthenge i-EA EA efuna i-MT4 / MT5-kuyakufuneka ubhalise kumrhwebi odumileyo we-forex ukuze uyisebenzise. Emva kwayo yonke loo nto, isoftware ifuna iqonga ukuze ikwazi ukukwenzela urhwebo!
Soloko ujonga ukuba umthengisi we-forex ungaphezulu kwebhodi, unelayisensi epheleleyo, kwaye ulawulwa ngumzimba ofanelekileyo. Nawuphi na umrhwebi osemthethweni we-forex kufuneka athobele imigaqo engqongqo yamaphepha-mvume-njengokucalulwa kwengxowa-mali. Ngokusisiseko, umrhwebi ogcina imali kufuneka agcine abaxhasi ngemali kude neyayo ukuyikhusela nakweliphi na ityala kwishishini njl.
Bonke abathengisi mabanike iingxelo zonyaka ezibonisa imisebenzi yabathengi. Amaqumrhu olawulo avavanya idatha ebonelelweyo. Kwimeko yorhwaphilizo, umlawuli ulungile ngaphakathi kwelungelo lakhe lokuthatha amanyathelo afanelekileyo.
Kukho uninzi lwabalawuli be-forex broker kwihlabathi liphela. Eminye imizimba eyaziwayo yile:
ASIC: IKhomishini yezoKhuseleko kunye noTyalo-mali lwase-Australia.
FCA: IGunya lokuZiphatha ngeMali (eUnited Kingdom).
I-CFTC: Izinto zorhwebo kunye Urhwebo lwexesha elizayo IKhomishini (eUnited States).
I-BaFIN: I-Federal Financial Supervisory Authority (eJamani).
CySEC: IKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwaseCyprus.
Ngokubalulekileyo, ukuba umthengisi we-forex okhethiweyo akalawulwa ngumzimba welayisenisi-thintela.
Eyona EA ye-Forex eNgcono
Kukho amawaka ababoneleli ababonelela 'ngako konke ukucula kunye nayo yonke ukudanisa' iirobhothi zangaphambili. Uninzi lwazo lubonelela abathengisi ukuba 'batyebe ngokukhawuleza' ngenye indlela kurhwebo lwesintu. Kodwa inyani kukuba, zininzi iinkampani ezingezizo nezobuxoki ezilinde ukuba zirhwebe kubarhwebi abangalindelanga.
Xa sele sithethile, sikulumkisile kwesi sikhokelo malunga nokuwa okunokubakho xa ukhetha i-EA engalunganga. Ngenxa yoko, ngoku uyazi ukuba ujonge ntoni.
Apha sidibanise uluhlu lwee-5 ze-EAs eziphezulu zokuthathela ingqalelo kwi-2022.
1. Ubushushu beFX
Oku kufuneka kube yenye yee-EAs ezidumileyo kuluhlu lwethu. Yenza ukuthengisa yonke imihla kusetyenziswa ubuchule bendlela kunye nenqanaba eliphantsi lomngcipheko. Le EA ye-Forex inokurhweba ngobuninzi beebhloko zemali ezi-7 nangaliphi na ixesha, kwaye urhwebo lunokushiywa luvulekile ixesha elide. Ngokwesicwangciso-qhinga sayo sokurhweba- iFX Fury sisikali esibalekayo esiya kwixesha le-M15 kwaye sinyanzelisa ukuthintelwa kwexesha lokurhweba.
Ngokukodwa kule minyaka idlulileyo, le robhothi ibonakalise amandla okuziqhelanisa neendlela zakutshanje zentengiso. Okwangoku ngeli xesha, iFX Fury EA iye yafumana uhlaziyo oluzenzekelayo olungaphezulu kwamashumi amathandathu, olungumqondiso omkhulu. Ungaluvavanya uninzi lweethiyori njengoko uthanda ngalo mboneleli we-EA EA, njengoko ibonelela ngeedemo ezingenasiphelo kwilayisensi nganye.
Nokuba ujonge nje ukuhambisa irobhothi ukwenza uphando lwakho lwe-forex, umboneleli ukhe wagubungela. I-FX Fury EA inezinye izinto ezihamba nayo. Umzekelo, ngaphezulu kwe-2,500 yabantu basebenzisa iFX Fury kwiiakhawunti zabo zokurhweba kwangaphambili yonke imihla. Lo mboneleli we-EA owaziwayo uhlala ehlaziya kwaye ephucula imveliso yawo kubarhwebi.
Inqanaba lokuphumelela elibangaweyo le-93%
Iziphumo ziqinisekisiwe ngeMyfxbook
Ndwendwela iFX Fury
Akukho ziqinisekiso zokuba uza kwenza imali ngalo mboneleli
2. Umjelo we-Forex 10
I-Forex Steam 10 yi-100% ngokuzenzekelayo. Unokukhuphela kakhulu le EA EA kwaye uqalise ukurhweba ngqo kwibhokisi, ngokuthetha. Ukuba ucinga ukuba awunamava kwintengiso ye-forex, kulula kakhulu ukuba uyilungiselele kwaye uyiqwalasele le robhothi. Oku kuthetha ukuba ungatshintsha izihluzo kunye noseto ukuze zilungele iimeko zakho ezithile.
Ngenxa yoko, ungasebenzisa i-EA EA apho ufuna uncedo kwaye ubambe kulawulo oluthile lokuthengisa. I-Forex Steam EA ibonakala ifumana iiakhawunti ezininzi minyaka le kwaye ithathwa ngokubanzi phakathi koluntu lokurhweba ukuba ikhuseleke kwaye ithembeke. Xa kuthethwa oko, akukho nto i-100% eqinisekileyo kwimarike ye-forex etshintsha kakhulu.
Akukho wand womlingo ongenabungozi, kodwa ukuba nabathengi abaninzi abathembekileyo luphawu oluqinisekileyo lokuba inkampani igcina abathengisi bonwabile. Iqonga lihlala linikezela ngohlaziyo (ezo zisimahla). Okukhona isoftware ihlaziyiwe, kokukhona amathuba okuphumelela ebhetele.
Nazi ezinye zezibakala kunye neempawu ezibandakanyiweyo kwi-Forex Steam 10 EA:
Uhlengahlengiso kwiziphumo eziqinisekisiweyo zomvuzo womngcipheko.
Ixabiso elinye - iinguqulelo ezahlukeneyo.
Bangaphezu kwama-3,000 abathengi abasebenzayo ngosuku.
Umyinge wokuphumelela umyinge wama-75%.
Ukunqanda urhwebo olubi usebenzisa 'ukusasazeka okukhulu'.
Uphuculo lokumisa okulandelayo ukwenzela ukubaleka okungcono.
Iimarike ezinkulu zihlaziya i-2022 ukuya phambili.
Kubarhwebi abathanda ukukhula ipotifoliyo yabo yorhwebo kancinci kancinci ngokuhamba kwexesha, kukho 'i-Forex Steam 10 EA ukukhanya'. Sifumene le forex EA ukuba yenye yexabiso elifanelekileyo kwiimveliso zemali kwimarike.
Umyinge wereyithi yokuphumelela ye-75%
Amabango okutsala abathengi abatsha abangama-3,000 yonke imihla
Ulwakhiwo lwamaxabiso alula
Ndwendwela i-Forex Steam 10
3. Isicwangciso esiliqili se Forex Robot
Abarhwebi bobomi bokwenyani kunye neekhowudi benze esi siCwangciso seBinary Forex Forex. Njengoko usenokuba uqikelele, le forex EA igxila kwimarike yokhetho olunambambili. Kuyatshiwo ukuba intengiso ye-binary options ithambekele ikakhulu kwabakhohlisi. Ke ukuba le yintengiso enomdla kuyo ke yenza izilumkiso ngaphambi kokuzibophelela. Le forex EA ibonelela ngeendlela ezimbini zesicwangciso esisekwe kukwahluka.
Ezi zicwangciso zimbini 'zobukroti' kunye 'nomoya'. Ngokungafaniyo nabanye ababoneleli be-EA EA, i-Binary Strategy Forex ibonelela ngazo zombini iimveliso ngexabiso elinye. Ngokubanzi, uninzi lwabarhwebi luya kuzamkela ezi ndlela. Nangona ungafumanisa ukuba ukuya kuthi ga kukhetho lwebhinari, abanye abayili be-EA EA abenzi iziphumo zifumaneke ngokulula. Kule meko, iMyfxbook (indawo yovavanyo lomntu wesithathu) ayinakuba nakho ukusingatha ezi ziphumo.
Isicwangciso seBhinary Forex EA sibonelela ngeziphumo zorhwebo zemihla ngemihla ezinokufumaneka kwiwebhusayithi. Iqonga libonelela ngeendlela ezinzulu zokubuyela umva kwi-MT4, oku kuthetha ukuba isoftware yayivavanywe ngokupheleleyo iminyaka kunye neminyaka ngaphambi kokuba baqale ukurhweba.
Nazi izinto ezimbalwa onokuzilindela kule Forex EA:
Uhlobo lwerobhothi ye-Forex: Iinketho zeBhinary.
Ixabiso:Ngaphantsi kweedola ezingama-200.
Zonke izibini ezikhoyo.
Ixesha lexesha le-M15 (ixesha lokuphelelwa yimizuzu eyi-15).
I-avareji ye-70-95% yokuphumelela izinga.
Ixabiso elingaphantsi kwama- $ 200
Ngaba ukurhweba naziphi isibini yangoku
Umyinge wereyithi yokuphumelela phakathi kwe-70% -95%
Ndwendwela iQhinga loBuchule beRobhothi
4. I-Astrobot ye-Forex
Le forex EA isebenze ngokuzenzekelayo kwaye ithi abathengisi banokwenza inzuzo ukuya kuthi ga kwi-16,000 yeedola ngenyanga enye. URita Lasker (umrhwebi owaziwayo we-forex) wenza i-Forex Astrobot. Le MetaTrader4 ye-forex ye-EA ikuvumela ukuba urhwebe ngamaxesha ahlukeneyo anjengeM15, M30 kunye neH1- kwaye igubungela uninzi lwemali emibini. Uya kwaziswa ngawo nawaphi na amathuba amatsha orhwebo ngendlela enye kwezi zintathu: i-imeyile, isilumkiso esivelayo seMT4 okanye isaziso sokutyhala okuhambayo.
Le forex EA inento eyakhelwe-ngaphakathi yolawulo lwemali. Oku kuthetha ukuba ungabuguqula ubungakanani beqashiso lakho xa iimeko zentengiso zinokuthi zihambe kakuhle kuwe. Kwimeko yokutshintsha kwamaxabiso ngokugqithileyo, i-forex ye-EA isebenzisa ialgorithm eyakhelwe-ngaphakathi egama lingu 'slippage'. Esi sixhobo sinokukunqanda ukuba ungene kurhwebo lwe-forex ngeeparamitha ezingalunganga.
Kuxhomekeka kwimeko yentengiso inqaku leTakeProfit kule EA linikezela ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuthatha inzuzo. I-Forex Astrobot EA ikwanazo ezi zinto zilandelayo njengenxalenye yemveliso:
Umndilili wokuphumelela ukuya kuthi ga kwi-80%.
Ixesha lexesha le-M15, M30 kunye ne-H1.
Iindleko - ukusuka kwi-100 yeedola ukuya malunga ne-$230 (yeyona 'nguqulelo yokugqibela').
Isicwangciso sokumisa umkhondo.
Ukuba uthenga le EA ye-forex kwaye ungayithandi nangasiphi na isizathu, unokusebenzisa ithuba leentsuku ezingama-30 zokubuya kwemali kwaye uyirhoxise.
24/7 inkxaso iyafumaneka
Amabango umyinge wokuphumelela ukuya kuthi ga kwi-80%
Isiqinisekiso semali ye-30-day back
Ndwendwela i-Forex Astrobot
5. I-EU yeRobomaster
Abaqulunqi be-Robomaster EU bancoma kakhulu le forex EA ye-scalpers yobuchwephesha. Ungathenga ilayisenisi enye nge-149 yee-euro okanye iakhawunti yelayisenisi engenamkhawulo nge-199 yee-euro.
Iirobhothi ezi-3 onokukhetha kuzo
Imodeli yamaxabiso efanelekileyo
Uninzi lwezicwangciso ze-forex zibandakanyiwe
Tyelela iRobomaster EU
Umatshini woRhwebo we-EA
Le yayiyesibini i-forex EA ekhutshwe nguRobomaster.eu kwaye isebenzisa isicwangciso se-scalping. I-forex EA iza nezicwangciso ezicwangcisiweyo, imiyalelo elula yomsebenzisi kunye nenkxaso yabathengi. Ixabiso lexabiso le-EA Trade Machine yi-€ 199 ye-akhawunti engenamkhawulo, kunye ne-149 ye-akhawunti eqhelekileyo.
Iimpawu ezibonelelwa ngababoneleli boomatshini boRhwebo be-EA ziquka:
Ixesha le-M5 ixesha le-Pacific, i-Asia kunye nexesha lokurhweba kwiseshoni yaseMelika.
7 izibini zemali.
I-20% - 50% inzuzo enokwenzeka (ngenyanga).
Isicwangciso sichazwe 'njengorhwebo olusingise kwicala leentsingiselo zehlabathi' (urhwebo lwetshaneli).
I-Rocket EA ibandakanya i-step-by-step manual yomsebenzisi, iifayile zokuseta ezilungiselelwe kwangaphambili kunye ne-24/7 inkxaso yabathengi. I-Rocket EA ithengisa ngababini bemali ye-12 ngaxeshanye, oku kuthetha ukuba isoftware iyakwazi ukwahlula umngcipheko wakho. Ukuba unomdla kwiziphumo zokurhweba, kukho i-12 eyahlukileyo yokubuyela umva. Ngelixa oko kubonakala ngathi kuninzi, linyathelo eliya kwicala elililo.
Ezinye zeempawu onokuzilindela kwi-Rocket EA zezi zilandelayo:
Urhweba iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-5 ngeveki.
Ixesha lokurhweba laseAsia.
I-10% - 20% yenzuzo enokwenzeka.
Izibini zemali ezili-15 zokurhweba.
I-Anglerfish Forex EA
Le forex yezifundo ze-EA kwii-trends ze-M5, M15, H1 kunye ne-H4 yexesha. Umboneleli ubanga ukuba iinzuzo ezinokubakho yi-10% -30% ngenyanga yekhalenda.
Ezi zibini zemali zilandelayo zinokuthengiswa kule EA; EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD, EUR/AUD, USD/JPY, EUR/CA.
I-Anglerfish Forex EA ixabisa i-175 ye-euro yoguqulelo lwezoqoqosho lwemveliso (ilayisensi e-1), kunye ne-€225 ye-Anglerfish Egcweleyo kunye neelayisensi ezingenamkhawulo. Zombini ziquka iincwadi ezineenkcukacha zomsebenzisi, inkxaso ye-24/7 kwaye usete iifayile zokucwangciswa kwemveliso ngokuzenzekelayo.
Ezinye zeempawu eziphambili kunye nezihluzi ezibandakanyiweyo kwisoftware ye-Anglerfish Forex EA zezi:
Isihluzi sexabiso lokutyibilika.
Inkqubo yokuyeka ilahleko.
Ixesha lokucoca ixesha.
I-Robomaster.eu ibanga i-98% yezinga lempumelelo kurhwebo kunye ne-Anglerfish.
Forex EA Intlanzi enkulu
Le forex EA yenzelwe ukujongana nazo zonke iimeko zemarike. Injongo kukubonelela ngenzuzo ezinzileyo ngokusebenzisa i-algorithm eguquguqukayo. Ixabiso le-Big Fish EA yi-€97 yelayisensi enye, kunye ne-€120 yenguqulo yelayisensi engenamkhawulo.
Njengezinye i-3 forex EAs ngeli qela, liza kunye ne-24/7 inkxaso yabathengi, iincwadana ezineenkcukacha kunye neefayile zokucwangcisa.
Iqonga le-robomaster.eu lishwankathele into enikezelwayo ngeBig Fish EA njenge:
Yenzelwe ukurhweba nge-USD/JPY.
I-10% - 50% yenzuzo enokwenzeka.
Urhwebelwano kwi-pullbacks (kuxhomekeke kweliphi icala indlela ehamba ngayo).
Eyona Forex ye-EAS: Ekugqibeleni
Eyona nto iphambili kukuba ii-EAs zangaphambili ziyindlela ebalaseleyo yokurhweba ngaphandle kokuphakamisa umnwe, oko kuthetha ukuba ungasiphepha isidingo sokuqonda iitshathi kunye nophando kwiinyanga ezisekupheleni.
Ukuba ngumrhwebi we-forex onamaxesha angathatha iminyaka, ngenxa yoko akumangalisi ukuba ii-newbies ezininzi ziguqula ii-EAs zangaphambili ukuze zifikeleleke lula kwintengiso. Umane ukhuphela i-EA oyikhethileyo kwaye uyenze ikwenze konke ukuthenga, ukuthengisa kunye nohlalutyo lobuchwephesha kuwe.
Kwaye abatyali mali abaziingcali baphoswa liqhinga. Ngokutshintsha useto olumbalwa kwaye uvumele i-EA ukuba ibe-semi-automated, le software ikrelekrele yealgorithmic kukongeza kakhulu kwisicwangciso esele sikhona sokurhweba ngaphambili.
Ngokubalulekileyo, ukuthatha ithuba elipheleleyo kuzo zonke izilingo zasimahla, iziqinisekiso zokubuyisa imali kunye neeakhawunti zedemo yindlela efanelekileyo yokufumana iinyawo zakho kwindawo ye-EA yaphambi kokuba ulahle imali kuyo ngokungaboni.
Ngaba ndingasebenzisa ii-EA ezingaphezulu kwesinye kwiakhawunti efanayo?
Uninzi lwabarhwebi be forex luya kukuvumela ukuba usebenzise i-EA engaphezulu kwenye kwiakhawunti efanayo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge iqonga elithile.
Ngaba kuya kubakho nayiphi na intlawulo yenyanga xa usebenzisa i-Forex EA?
Impendulo yoku ixhomekeke ekubeni yeyiphi i-Forex EA oyikhethayo. Ezinye ii-EAs zihlawuliswa njengentlawulo yexesha elinye kwimveliso, kubandakanya uhlaziyo kunye nenkxaso kubathengi njlnjl. Isekwe kwikhomishini, ke uya kuhlawuliswa umrhumo kurhwebo ngalunye olunenzuzo.
Ngaba kukho idipozithi encinci efunekayo yokuthengisa ngeakhawunti ye-EA EA?
Uninzi lwababoneleli be-EA EA banedipozithi encinci ukuba ukhetha iphakheji ezenzekelayo. Jonga nomboneleli obuzwayo. Ukuba uthenga i-EA EA ehambelana neMT4 / 5, ubuncinci bobuncinci buchongwa kukhetho lwakho lomrhwebi.
E-UK, umzekelo, bonke abathengisi be-forex kufuneka bafumane ilayisensi kwi-Financial Conduct Authority (FCA). Nawuphi na umrhwebi obambeleyo onephepha mvume ulawulwa ngokupheleleyo. Ngaphaya koko, oku kuthetha ukuba iimali zakho zorhwebo zikhuselwe ngokwahlulwa kwemali. Ngaphandle kwe-UK, amanye amaqumrhu anelayisensi ekufuneka eyijongile zi-MAS, i-CySEC, kunye ne-ASIC.
Ngaba ndiyakwazi ukurhoxisa i-EA EA ukuba andiyithandi?
Oko kuxhomekeke kwiqonga le-EA EA. Abanye ababoneleli banikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali (ihlala iyintsuku ezingama-30). Abanye banikezela kuphela ngesilingo simahla emva kokuthenga i-EA.